Igadi ye-Queen Elizabeth ineSimanga seCorgi - Uhlobo Lodumo
Igadi ye-Queen Elizabeth ineSimanga seCorgi
Ewe, Igadi ye-Queen of England izele zonke iintlobo zezityalo nezilwanyana, idubula iintyatyambo zasentwasahlobo kwaye ibekwe ngengca eyomileyo kude kube ngamehlo. Kodwa undwendwe olunye lwethamsanqa kwiigadi zikaLiz lusishiye sijongile into encinci engaqhelekanga: umfanekiso omnandi omangalisayo, omangalisayo wokuthandeka we-corgi, uhlobo lokukhetha inja kaKumkanikazi.
ngaphandle kwezibane zekrisimesi zendlu
Izolo, umthandi wobukumkani uLaura-Ann, ibhlog yaseNyakatho yeIreland ehamba ngesiphatho se-Instagram @ zonke.thats.pretty, Wenza yonke into emnandi yasebukhosini, xa wayemenyiwe -kunye nomama wakhe-kwelinye lamatheko egadi ukumkanikazi. Njengaye nawuphi na u-Instagrammer ozinikele kubalandeli bakhe abathembekileyo, uLaura-Ann uhambise kwisebe le- # lomxholo, erekhodisha ingxelo engemiyo yomhla wakhe, ekufikeni Ibhotwe laseBuckingham ukungcamla ii-scones zasebukhosini (bafumana imvume evakalayo) kulayini (uxolo, emgceni ) ukuya kubona uKumkanikazi-kunye neNkosana uHarry! Kwaye uBeatrice no-Eugenie! -Ukumbonisa ngesipha seentyatyambo. (Kule nxalenye yokugqibela, uLaura-Ann, umlandeli ozinikeleyo, beka phantsi ifowuni yakhe, esazi ukumkanikazi ukumkanikazi kubo; ngethamsanqa kuye, ummelwane wakhe esihlweleni ubambe umzuzu kwikhamera).
Instagram @ zonke.thats.pretty
Ukulandela imbaleki yakhe yasebukhosini, uLaura-Ann wenze nantoni na enokwenziwa ngumlandeli wokwenyani: ujikeleze amabala kancinane. Ubone intyatyambo eninzi kunye nokunye okutyaliweyo, kodwa emva koko wakhubeka kwenye yezakhiwo zegadi, apho wakroba ngefestile ukuze abone izitulo ezibini zeentyatyambo (kakhulu kwi-brand) kunye nomfanekiso omncinane omangalisayo okwimo yecorgi, eyenziwe wento ebonakala ngathi ngumthi ogobileyo okanye umsonto.
ULaura-Ann wayibiza ngokuba 'luhlobo lokuhombisa lwe-corgi' (inkcazo efanelekileyo), kwaye ngoku ngoku ndilula kufuneka unayo. Impumlo yayo encinci! Ubume bayo obunjengoboya! Nceda, ngaba umntu okwi-Etsy angaqala ukuzenzela ezi zinto ngobuninzi? Ukuba akunjalo, kuya kufuneka siqale ukucwangcisa i-heist yasebukhosini, enyanisekileyo eya kuba licebo elifanelekileyo lemovie elandelayo kwilungelo lokuloba elwandle.
I-chip kunye ne-joanna zuza indawo yokuhlala
itafile yekofu enomgodi womlilo
Indawo yomlilo engaphandle enetv